Gungwa - Wikipedia
Tarisai futi Magungwa e pasirose
Magungwa e pasirose
Gungwa (Chirungu: ocean) muchidzidzo taranyika izwi rinoreva nzvimbo dzakakurisa dzinochengeta mitumbi yemvura yakawanda samare, iyi mvura iri mugungwa inowanikwa iine munyu zvokuti hainwike. Magungwa makuru anosanganisira Gungwa reIndiya, Gungwa rePasifiki, ne Gungwa reAtirandiki, Gungwa rekuChamhembe ne Gungwa reAkitiki.
Kana uso hwePasirose hwapimwa panoonekwa kuti chikamu che 71 pazana (71%) chakafukidzwa nemvura yegungwa.
Chikuva cheGungwa (seabed) - mazwi aya ari kuumbwa pachinyorwa chino kududza pavhu riri pasi pegungwa. Iro izwi rokuti guva (floor, dusty sitting place) rinoreva pasi patinotsika kana kugara.
Menderekedzo, mhendero gombe kana mahombekombe (shore) zvinoreva chikamu chenyika chiri pedyo uye chakabatana negungwa, rwizi kana nyanza.
Chipforo chegungwa (Seashore, coast) (Genesis 49:13 Bhaibheri reChindau)
Muchenga (Sand, Beach) iri izwi rinoreva jecha kuChichewa asi pano riri kushandiswa kuturikira beach. Izwi rokuti rushesha rinoreva jecha, asi pano riri kushandiswa kuturikira chinonzi beach kuChirungu nokuti beach rinotaurwa pane jecha. Pahombekombe pasina jecha, hapana beach.
Guva reGungwa (Sea floor) iri izwi riri kushandiswa kuturikira pavhu pasi pegungwa.
Yesu vakatsiura bhahari rikadzikama pakare pakare - Jesus rebuked the sea and it became calm right away.
Bhahari (sea) raive shoko rekudhara raishandiswa kumirira rinonzi 'sea' muChirungu. 
Ruandhle (sea, ocean, marine) ishoko reChindau rinomirira zvose kuti bhahari uye gungwa, asi richange richishandiswazve kumirira chinonzi marini kuChishongrish kutora shoko reChingezi marine.
Tonga inoti kunga (in front of) zvichireva kuunganidza. VaMaconde vanoti kukunga (collect, gather together) vachireva kuunganidza.
VaTonga vanoti lwanze (n. sea) kureva gungwa. VaBarawani vanoti tawala (ocean;sea) kureva gungwa.
Lozi inoti -kunga (v.t. to gather, to collect, to muster) kureva kukunga. Hadiyya inoti dambala (n. sea, ocean) kureva gungwa.
Barotse vanoti -kunga (v.t. to gather, to collect, to muster). Mamwe Mazwi - kungile, -kungushula kana kungushuzi
Herero inoti oku-vare (n. ocean;sea) kureva gungwa. Mamwe mazwi: omu-vare (n. sheet of water).
↑ 'A vocabulary of the dialects of Mashonaland in the new orthography' Peji 2. Yakatariswa: 23 Chikumi 2021 Muchinyakare pakabharwa (nyorwa) nwadhi (bhuku) iri mabhii eChishona akange akasiyana - Shona Wiki., "Chishona: Mabhii ekare"
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Gungwa&oldid=95780"
This page was last edited on 15 Chikumi 2022, at 16:21.